သစ်ဆန်းခန့်: U8833 Y300-0000 V4.1.1 ကို Root မယ် Pages
U8833 Y300-0000 V4.1.1 ကို Root မယ် U8833 Y300-0000 V4.1.1 Bulid number B170 Kernel 3.4.0 ပါ 100% စမ်းပြီးပါပြီ
Y300-0000 Root ZIP ကိုဒီမှာဒေါင်းပါ
Unlock Root 3.1 ကိုပါထည့်ပေးထားပါတယ် ရလာတဲ့ zip ကိုဖြည်လိုက်ပါ dload ကို sc Card ထဲထည့်ပါ
ဖုန်းကိုပိတ်ပါ Vol down + Vol Up + power ကိုနိပ်ပါ Update လုပ်သွားပါမယ် ပြီးရင် Reboot လုပ်သွားပါမယ် ပြန်တက်လာရင် Unknown Soures & USB debugging ကို အမှန်ချစ်ပေးပြီး Unlock Root 3.1 နဲ့ တီးလိုက်ပါ အပင်ပါထွက်လာမယ်နော သတိတော့ထား Reboot ပြန်လုပ်သွားပါမယ် ပြန်တက်လာရင် Root ပြီးပါပြိး
သတိပေးချက် ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ရေးထားပေးတဲ့V4.1.1 Bulid number B170 Kernel 3.4.0
အဲဒါတွေ နဲ့ မကိုင်ညီးဘူးဆိုရင် ဒီ file နဲ့ မလုပ်ပါနဲ့ လုပ်မိခဲသော် ဖြစ်ပေါ်လာတော့ ပြသနာ မိမိ တာဝန်သာ ပြစ်ပါတယ် အောက်မှာ ပုံလေးတွေ ကြည့်လိုက်ပါ အားလုံး အစဉ်ပြေပါစေ စာရေးသူ
AnonymousFebruary 3, 2013 at 12:39 AMdownload link လေးစစ်ပေးပါအုံးReplyDeleteAnonymousFebruary 5, 2013 at 3:08 AMplease ReplyDeleteနည်းပညာစုစည်းမှုFebruary 6, 2013 at 7:14 PMအကိုရေ Download လင့်က မရတော့ဘူးခင်ဗျ အဆင်ပြေရင်ပြန်တင်ပေးပါဦးReplyDeleteမောင်ပေါက်February 18, 2013 at 12:19 PMကို shitsanmg19 ရေ. ပြောပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ.. အစ်ကိုတို့လိုပညာရှင်တွေကို လေးစားလျက်ပါ..ReplyDeleteAnonymousMarch 4, 2013 at 2:08 AMဒေါင်းလို့မရလို့ပါဗျာ.. အဆင်ပြေရင် ပြန်တင်ပေးပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်လျှက်ReplyDeletekokomaungMarch 9, 2013 at 2:35 AMhttp://www.mediafire.com/?l9tllz7pn1xygimဒေါင်းလို့ဖိုင် ဖြီလိုက်တော့ dload ဖိုင်းလေးရယ်၊ Unlock Root 3.1 လေးရယ် နှစ်ခုတွေ့ပါတယ်နော်..အကို Unlock Root 3.1 ဖိုင်လေးကို ထပ်ဖြီးကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေပြီး enter password တောင်းနေပါတယ်..အကို အဲဒီ password ကိုဘယ်မှာရှာရမှာလဲ...ဒါမဟုတ်ရင် Root လုပ်တဲ့အခါ Unlock Root 3.1 ဖိုင်းကိုအဲဒီအတိုင်ထည့်လိုက်ရင်ရတယ်မဟုတ်လား..အကို ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ms.kokomaung007@gmail.com ကိုပြန်ပြောပြပေးပါအုံးနော်....ReplyDeleteAnonymousMarch 18, 2013 at 6:12 AMဟုတ်တယ်အစ်ကို ကျွန်တော်လည်း password ပြဿနာတက်နေတယ်အစ်ကိုReplyDeletenayethitMarch 20, 2013 at 1:26 AMကျွန်တော့်မှာလဲ password တောင်းနေတယ်ပြီးတော့ အကိုပြောသလိုUnknown Soures & USB debugging တတ်မလာဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲသေချာရှင်းပြစေချင်ပါတယ် အောင်မြင်ပါစေခင်ဗျာ အကိုတို့လို လူတော်တွေရှိမှ တိုင်းပြည်တိုးတတ်မှာReplyDeleteAnonymousMarch 31, 2013 at 5:23 AMCan i take this for Huawei G510 B170 ? ReplyDeleteAnonymousApril 8, 2013 at 12:31 PMthank u so much ReplyDeleteAnonymousApril 8, 2013 at 12:33 PMthank ko chitsanmag19ReplyDeleteAnonymousApril 8, 2013 at 2:07 PMunlock root 3.1 ka password toung nay bar tel;phone mhar lel phyay lo ma ya bu phyit nay del,pls reply me...ReplyDeletezYaApril 19, 2013 at 4:18 AMကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို ..unlock root ကို တခြားဆိုဒ်က ဒေါင်းပြီး လုပ်လိုက်တာ ၇သွားပါတယ် ReplyDeleteAnonymousMay 3, 2013 at 7:33 PMroot လုပ်တာရတယ် မြန်မာဖောင့်ထည့်လို့ မရဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲReplyDeleteRepliesHtun MinMay 9, 2013 at 3:36 AMအစ်ကိုရယ် Root ရမှတော့ Zawgyi Changer နဲ့တွယ်လိုက်တော့ပေါ့..။ DeleteReplyNaing HtuMay 5, 2013 at 1:06 AMB 172 ဖြစ်နေလို့ ပါ ဘယ်လို လုပ်ရ လဲ နောက်တမျိုး နဲ့ Root ရမလား အကိုReplyDeleteSlarkMay 15, 2013 at 6:15 AMရှဲရှဲ ဗျာ ....တိန် တရုတ်နဲ့ အနေနီးသွားလို့ ဗျReplyDeleteSlarkMay 15, 2013 at 6:16 AMသင်တို့ ရဲ့ ဝေဖန်ချက် မှတ်ချက် များဟာ ကျွန်တော့် အတွက် အားဆေးပါ။(မှန်ပါ၏) ReplyDeleteSlarkMay 15, 2013 at 6:30 AMသစ်=အသစ်အသစ်တွေနဲ့ဆန်း=အဆန်း အဆန်းတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီးကြည့်ရှုဖို့ခန့် =ခန်.ညားထည်ဝါစွာတည်ရှိနေမဲ့www.thitsankhant.comဟုတ်တယ်ဟုတ်...ReplyDeleteAdd commentLoad more...